ခရီးသွား လုပ်ငန်းများတွင် ပုံမှန်ဈေးကွက် ရှာဖွေနေခြင်းထက် e-Commerce ဖြင်ြ အွန်လိုင်းပေါ်မှ ဈေး? - Yangon Media Group
ခရီးသွား လုပ်ငန်းများတွင် ပုံမှန်ဈေးကွက် ရှာဖွေနေခြင်းထက် e-Commerce ဖြင်ြ အွန်လိုင်းပေါ်မှ ဈေး?
နည်းပညာ ခေတ်ဖြစ်လာပြီဖြစ်၍ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများတွင် ပုံမှန်ဈေးကွက်ရှာဖွေ နေခြင်းထက် နိုင်ငံတကာနည်းတူ e-Commerce ဖြင့် အွန်လိုင်းပေါ်မှ ဈေးကွက်ရှာဖွေသည့် ဈေးကွက်မဟာဗျူဟာများ ပြောင်းလဲအသုံးပြုရန် လိုနေပြီဖြစ်ကြောင်း ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးတင့်သွင်က ပြောသည်။
အဆိုပါအကြောင်းကို ဇွန် ၃ဝ ရက်က UMFCCI တွင် ကျင်းပသည့် ‘မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၏ (၁၃)ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေး’အခမ်းအနားတွင် အမှာစကားပြောရာတွင် ထည့်သွင်းပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ”ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ခရီးသွား လုပ်ငန်းမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်နေတယ်။ အဓိကကျတဲ့ကူညီဆောင်ရွက်မှုတွေကို ပေးနိုင်မယ့်အရာတွေကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ တစ်ခုက တော့ နိုင်ငံတကာရဲ့အခြေအနေပါ။ ဒီကနေ့ ခရီးသွားရေးလောကဟာ ပုံမှန်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ထက် တိုးတက်မြင့်မားလာပြီးတော့နည်းပညာခေတ် Information Technology ခေတ်ကို ရောက်လာ ပြီဖြစ်တဲ့အတွက် e-Commerce ခေတ်ကိုရောက်နေပါပြီ။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီကနေ့ marketing လုပ်နေတဲ့ နေရာမှာ အရင်လိုလုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကို စီမံခန့်ခွဲဖို့အတွက် အရင်လို Package Tour တွေကို အားကိုးနေတဲ့ကြီးမားတဲ့ ကုမ္ပဏီ ကြီးတွေရဲ့ ဈေးကွက်ဗျူဟာတွေကို ပြန်လည်ပြင်ဆင် ပြောင်းလဲဖို့သင့်ပါပြီ။ ခရီးသွားမယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာပေါ် မှာရှိတဲ့ Website ကြီးတွေမှာလည်း လွယ်လွယ်ကူကူ ကြည့်လို့ရနေပြီ။ ဘယ်ကိုသွားမလဲ၊ ဘယ်လိုသွားမယ်၊ ဘယ်ဟိုတယ်မှာ တည်းမယ်ဆိုတာ အရမ်းမြန်ဆန်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ လေကြောင်းလိုင်းတွေကလည်း အွန်လိုင်းကနေ လက်မှတ်ကို တိုက်ရိုက် ရောင်းချနေတဲ့အတွက် ဈေးကွက် စီးပွားရေးစနစ်တွေ ပြောင်းလဲလာ ပြီဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဟိုတယ်နှင့်ခရီး သွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန ညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ် ဦးတင့်သွင်က အခမ်း အနားတွင် ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိအခြေအချိန်တွင် အနောက်နိုင်ငံများမှလာ ရောက်မှုလျော့ကျသွားပြီဖြစ်ပြီး ယင်းအခြေအနေကို မြှင့်တင်နိုင်ဆောင်ရွက်ကြရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အစည်းအဝေးတွင် မြန်မာ့ခရီးသွားလာရေး လုပ်ငန်းဥပဒေမူကြမ်း အကြောင်းကို အဓိကထားဆွေးနွေးကြကြောင်းသိရသည်။ ”လောလောဆယ် မြန်မာနိုင်ငံကို လာတဲ့အနောက်အုပ်စုတွေက လျော့ကျသွားပြီ။ အရှေ့အုပ်စုနိုင်ငံ တွေကို ဦးတည်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်သလို အနောက်အုပ်စုနိုင်ငံတွေကိုလည်း လျစ်လျူမရှုဘဲ ဈေးကွက်မြှင့်တင်နိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၏ ဥက္ကဋ္ဌဦးသက်လွင်တိုးက မီဒီယာများကို ပြောသည်။ ဇွန် ၃ဝရက်တွင် ကျင်းပသည့် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးပွဲတွင် အသင်း၏ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးကျော်က မြန်မာနိုင်ငံသားများသာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများလုပ်ပိုင် ခွင့်ပေးရန်နှင့် နိုင်ငံခြားသားလုပ် ငန်းရှင်များနှင့် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများ ကို လုပ်ခွင့်မပြုရန် အဆိုကိုတင်သွင်း ခြင်း၊ ဆွေးနွေးထောက်ခံခြင်းများ ပြုလုပ်ကြသည်။
ယင်းအဆိုနှင့်ပတ်သက်၍ ခရီး သွားလုပ်ငန်းတွင် အတွေ့အကြုံများသည့် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး (ငြိမ်း)အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် ဦးအေးမြင့်ကြူက ”မြန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို တိုးတက်ချင်တာလား။ ကျွန်တော်တို့ Tour Operator တွေတိုးတက်ချင်တာလား ဆိုတာလေးကိုတော့ ထည့်သွင်းစဉ်း စားစေချင်ပါတယ်”ဟု ပါဝင်ဆွေး နွေးခဲ့သည်။ အခမ်းအနားတွင် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးနောင်းနောင်းဟန်က နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာဖတ်ကြားတင်ပြခြင်း၊ အတည်ပြုခြင်း၊ ဘဏ္ဍာ ရေးမှူးမှ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ဘဏ္ဍာရေး နှစ်အတွက် နှစ်ချုပ်ငွေစာရင်းရှင်း တမ်းဖတ်ကြားတင်ပြခြင်း၊ အတည် ပြုချက်ယူခြင်း၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီက တွေ့ရှိချက်များတင်ပြခြင်း၊ သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း အသစ်ပြင်ဆင်ချက်ကိုတင်ပြခြင်း (ယခင်အမှုဆောင် သက်တမ်းနှစ် နှစ်မှ သုံးနှစ်ပြောင်းရန်)၊ မြန်မာ့ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ဥပဒေမူကြမ်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေး ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ရယူခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
သာမညဆရာတော် ဝင်စားသည်ဆိုသည့် ၁၃ နှစ်အရွယ် ပအိုဝ့်လူမျိုး ခွန်သာထွေး၏ မွေးနေ့ ပြုလုပ်မည်ဖြ??